दार्चुलामा सहकारीभन्दा बैंकको प्रभाव बढी | Nepal's First Co-operative News Portal.
Home अन्तर्वार्ता [Interview] दार्चुलामा सहकारीभन्दा बैंकको प्रभाव बढी
अध्यक्ष, जिल्ला सहकारी संघ, दार्चुला
दार्चुलाको सहकारी अभियान कसरी अघि बढेको छ ?
दार्चुलामा १ सय २७ प्रारम्भिक सहकारी र दुई संघ रहेका छन् । सबैभन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी स्थापना भएका छन् । त्यसपछि बहुउद्देश्यीय, कृषि सहकारी छन् । उपभोक्ता १ र १ विद्युत् सहकारी छन् । समग्रमा जिल्लाको सहकारी अभियान ठीकै छ । ३०/४० वटा मात्रै क्रियाशिल रुपमा छन् । ती सहकारीले राम्रै काम गरेको छ । वित्तीय पुहुँच गाउँ गाउँमा पु¥याउन सफल भएको छ ।
सहकारीको लगानी के मा केन्द्रित छ ?
ठूला कारोबार गर्ने सहकारीले बैदेशिक रोजगारी, व्यापार व्यवसाय, घर–जग्गामा बढी लगानी गरेका छन् । पशुपालन र कृषि क्षेत्रमा पनि राम्रो लगानी सहकारीको छ । गाउँ गाउँमा सानो सानो व्यवसायमा पनि लगानी छ ।
बैंक र सहकारी बीच प्रतिस्पर्धा कस्तो छ ?
सदरमुकाम क्षेत्रमा बैंकको प्रभाव धेरै छ । व्यवसायीमा बैंकले प्रभाव जमाएका छन् । गाउँ गाउँमा भने सहकारीको प्रभाव बढी छ । गाउँ गाउँमा बैंकको पहुँच छैन ।
अन्य जिल्ला र दार्चुलाको सहकारी बीच के फरक पाउन भएको छ ?
काठमाडौं, पोखरा, नवलपरासी, सुर्खेत लगायत क्षेत्रको सहकारी अध्ययन गरेको छु तर ती क्षेत्रको जस्तो सहकारी दार्चुलामा छैनन् । संख्यात्मक रुपमा हामी कम छौं । जिल्ला संघ सक्षम पनि भैसकेको छैन । सूदुरपश्चिम क्षेत्रका सहकारीको तुलनामा हामी बलिया छौं । राम्रै काम गरेको जस्तो लाग्छ ।
जिल्ला संघले के गर्दै आएको छ ?
सहकारी संस्थालाई शिक्षा, तालिममा जोड दिएका छौं । नेफ्स्कून, सहकारी महासंघको सहकार्यमा तालिम, गोष्ठी लगायतको काम गर्दै आएका छौं ।
सहकारीका सदस्यले सहकारी कत्तिको बुझेका छन् ?
बुझाई कमै छ । त्यसमा सन्तुष्ट छैन । २०५३ सालबाट दार्चुलामा सहकारी अभियान दार्चुलामा सुरु भयो । त्यसभन्दा अघिका मानिसमा सहकारीको बारेमा ‘स’ पनि थाहा छैन । भविष्यमा सबैले सहकारी बुझ्नेछन् भन्ने अपेक्षा गरेका छौं ।